အကူအညီ:ဖိုင်စာမျက်နှာ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဝီကီပီးဒီးယား သို့မဟုတ် ဝီကီမီဒီယာ ကွန်မွန်းသို့ ပုံ၊ ဗီဒီယို သို့မဟုတ် အသံဖိုင်ကို upload တင်လိုက်သည့်အခါ သက်ဆိုင်ရာ ဖိုင်စာမျက်နှာ (ဖိုင်အကြောင်း ဖော်ပြချက် စာမျက်နှာ သို့မဟုတ် ပုံအကြောင်း ဖော်ပြချက် စာမျက်နှာ)သည် ဖန်တီးပြီး ဖြစ်သည်။ ထိုစာမျက်နှာများ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဖိုင်နှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များဖြစ်သည့် ဖိုင်ဖန်တီးသူ၊ ဖန်တီးသည့်နေ့ရက်၊ ဖိုင်တင်ခဲ့သူနှင့် အခြားပြင်ဆင်ပြောင်းလဲချက်များ ပြုလုပ်ထားမှုများအား ဖော်ပြပေးနိုင်ရန် ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဖိုင်အကြောင်းအရာ၊ မည်သည့်နေရာတွင် အသုံးပြုထားသည်နှင့် လိုင်စင် သို့မဟုတ် မူပိုင်ခွင့် အချက်အလက်များကိုလည်း ဖော်ပြပေးနိုင်ရန် ဖြစ်သည်။
ဖိုင်စာမျက်နှာပေါ်ရှိ ပုံ သို့မဟုတ် ဗီဒီယိုဖိုင်အား ကြည့်ရှုရန်အတွက် ပုံကို နှိပ်ပြီး ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ အသံဖိုင်အတွက် အသံဖိုင်လင့်ခ်အနီးရှိ အချက်အလက်ခလုတ်ပုံ ကို နှိပ်ကာ နားဆင်နိုင်သည်။
ဖိုင်စာမျက်နှာတစ်ခုတွင် အစိတ်အပိုင်း ငါးခု ပါဝင်သည်။
တည်းဖြတ်နိုင်သော အပိုင်း: ဤအပိုင်းတွင် ဖိုင်အကြောင်း ဖော်ပြချက်၊ ရင်းမြစ်နှင့် မူပိုင်ခွင့် အချက်အလက်များ ပါဝင်သည်။ တည်းဖြတ်ရာတွင် ဤအပိုင်းသည် Wikitext ဟုခေါ်သော ဝီကီဘာသာရပ်စကားဖြင့် တည်းဖြတ်နိုင်ပြီး Template:Information ၏ အချက်အလက် ပါရာမီတာများ ပါဝင်သည်။
ဖိုင်ရာဇဝင် (သို့) ဖိုင်မှတ်တမ်း: အမည်တူဖိုင်အသစ်ကို နောက်ထပ် upload တင်ပါက ရှိနှင့်ပြီးဖိုင်အား အစားထိုးကာ ယခင်ဖိုင်အား ဖိုင်မှတ်တမ်းမှ တဆင့် ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ Help:စာမျက်နှာ ရာဇဝင် ကို ကြည့်ပါ။
ဖိုင်သုံးစွဲမှု: ဖိုင်အားသုံးစွဲထားသည့် စာမျက်နှာများ စာရင်းဖြစ်သည်။ ဖိုင်သည် Commons မှ ဖြစ်ပြီး အခြား ဝီကီမီဒီယာ ဝီကီများမှ သုံးစွဲထားမှု ရှိပါက "Global file usage" အပိုင်းလည်း ပါဝင်မည် ဖြစ်သည်။
Metadata (ပုံများအတွက်သာ): ဖိုင်အကြောင်း ဒစ်ဂျစ်တယ် အချက်အလက်များနှင့် အသုံးပြုထားသည့် ကိရိယာ (ကင်မရာ မော်ဒယ်) စသည်တို့ကို ပြသပေးသည်။
အောက်ပါတို့သည် ဖိုင်အမျိုးအစား အမျိုးမျိုးတို့အတွက် နမူနာများ ဖြစ်သည်။
၁ တည်းဖြတ်နိုင်သော အပိုင်းရှိ အသုံးဝင်အရာများ
၁.၁ ဖိုင် ဖော်ပြချက်
၁.၂ ဖိုင် အကျဉ်းချုပ်
၁.၂.၁ ပုံ အကျဉ်းချုပ်
၁.၃ မူပိုင်ခွင့် အချက်အလက်များ
၁.၄ အသုံးဝင်သော လင့်ခ်များ (ဝီကီအတွင်း)
၁.၅ အခြား ဗားရှင်းများ
၂ အခြား အချက်များ
၂.၁ Wikimedia Commons
၂.၃ ဖိုင်ကို တည်းဖြတ်ခြင်း
၂.၄ upload လုပ်ချိန်မှာ ဘာဖြစ်သွားသလဲ
၂.၅ ဘာသာစကားအချင်းချင်း ချိတ်ဆက်ခြင်း
၂.၆ မူရင်းပုံများကို upload တင်ခြင်း
၂.၇ ဖိုင်များကို ကဏ္ဍခွဲခြင်း
တည်းဖြတ်နိုင်သော အပိုင်းရှိ အသုံးဝင်အရာများ
တည်းဖြတ်နိုင်သော အပိုင်းသည် ဖိုင်ကို ဖော်ပြထားရန်နှင့် ထပ်ဆောင်းအချက်အလက်များ ဖော်ပြရန် ဖြစ်သည်. အစောပိုင်းတွင် ဤအပိုင်း၌ ကနဦးဖိုင်တင်စဉ်က ထည့်သွင်းလိုက်သော ပုံတင်ခြင်း အကျဉ်းချုပ် အချက်အလက်များကို ဖော်ပြပေးသည်။ အောက်ပါတို့သည် ဖိုင်စာမျက်နှာတွင် ထည့်သွင်းရမည့် အသုံးဝင်အရာများ ဖြစ်သည်။
ဥပမာ။ ။"ရေကန်ငယ်အတွင်းမှ ရွှေငါးတစ်ကောင်"။
သင်သည် ဖိုင်ကို အခြားတစ်နေရာမှ ဒေါင်းလုပ်ရယူခဲ့သည် ဆိုပါက ရယူခဲ့သည့် ရင်းမြစ်နေရာ၊ ဖန်တီသူ အစရှိသော အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို ထည့်သွင်းသင့်ပါသည်။ ရင်းမြစ်များကို ကိုးကားခြင်း ကို ကြည့်ရှုပါ။
ဤနေရာသည် ဖိုင်အကြောင်း ထပ်ဆောင်းအချက်အလက်များနှင့် မည်သို့ ဖန်တီးခဲ့သည်၊ ဖန်တီးခဲ့သည့် နေရာ၊ အချိန်၊ ဖန်တီးသူ အစရှိသည်တို့နှင့်၊ မည်သည့်ပုံဖြစ်သည်ဆိုသည့် အကြောင်း စသည်တို့ကို ရေးသားဖော်ပြရန် နေရာ ဖြစ်သည်။
နမူနာ။ "___ ကင်မရာဖြင့် ရေအောက်တွင် ကျွန်တော် ရိုက်ကူးခဲ့သော ____ ငါး။"
ပုံကို အသုံးပြုထားသော ဆောင်းပါးများတွင် ပုံစာညွှန်း ပါလေ့ရှိသော်လည်း ယင်းတို့သည် ပုံအကြောင်း ဖော်ပြချက် အပြည့်အစုံထက် တိုတောင်းလေ့ရှိပြီး ဆောင်းပါးပါ အကြောင်းအရာနှင့် နီးစပ်စွာ ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။
ဖတ်ရှုသူများသည် ဆောင်းပါးအတွင်းရှိ ပုံကို ကြည့်ရှုပြီး နောက်ထပ် အချက်အလက်များ သိရှိနိုင်ရန် ပုံကိုနှိပ်ကာ ဖိုင်အကြောင်း ဖော်ပြချက် စာမျက်နှာသို့ ရောက်ရှိလာတတ်သည်ကို မှတ်သားထားပါ။
အကယ်၍ သင်သည် ပုံကို သင်ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးခဲ့ပါက အချို့သော မေးခွန်းများကို သင်ကိုယ်တိုင်သာ ဖြေဆိုနိုင်ပါလိမ့်မည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် နောက်ပိုင်းတွင် ထိုမေးခွန်းများကို ဖြေဆိုရန် စာမျက်နှာသို့ သင်မလာရောက်နိုင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သဖြင့် ဖိုင်ကို တင်သည့်အချိန်ကတည်းက အချက်အလက်များအား ဖော်ပြချက်စာမျက်နှာတွင် တပါတည်း ထည့်သွင်းသင့်သည်။ ဤသို့ဖြင့် တည်းဖြတ်သူများအတွက် ပုံကို ကောင်းမွန်သေချာစွာ အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သလို လာရောက်ဖတ်ရှုသူများအတွက်လည်း အချက်အလက်များ ပေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ဓာတ်ပုံကို မည်သည့်နေရာတွင် ရိုက်ကူးခဲ့ပါသလဲ?
ဓာတ်ပုံထဲရှိ လူများအားလုံးနှင့် ထင်ရှားသည့် အရာဝတ္ထုများ၏ အမည်တို့ကို ပြောပါ?
ပုံစံကားများနှင့် အမှတ်အသားများအကြောင်းကို ဖြစ်နိုင်ပါက အပြည့်အစုံ ရှင်းပြပေးပါ။
လိုအပ်ပါက အဓိအချက်အလက် (key) သို့မဟုတ် legend တို့ကို ဖော်ပြပေးပါ။
ဓာတ်ပုံများအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ:
ဖလင်ကင်မရာကို အသုံးပြုပါက မော်ဒယ်နံပါတ်၊ မှန်ဘီလူးအချက်အလက်နှင့် exposure အပြင်အဆင်များကို ဖော်ပြပါ။
ရိုက်ကူးပြီးနောက် နောက်ထပ် မည်သည့် ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်မှုများ (အရောင်ချိန်ညှိခြင်း၊ အလင်းအမှောင်ချိန်ညှိခြင်း စသည်) ပြုလုပ်ထားပါသလဲ?
ဖန်တီးထားသော ပုံများအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ:
ပုံကို ဖန်တီးရန် သို့မဟုတ် တည်းဖြတ်ပြင်ဆင်ရန် မည်သည့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို အသုံးပြုထားသလဲ?
ရှိနှင့်ပြီးသော မည်သည့်အရာများ (မူပိုင်ခွင့်ကင်းလွတ်ပုံများ၊ ဓာတ်ပုံများ စသည်) ကို ထည့်သွင်း အသုံးပြုထားပါသလဲ?
ဖိုင်အားလုံးသည် မူပိုင်ခွင့် အချက်အလက်များကို ထည့်သွင်းပေးရမည် ဖြစ်သည်။ ဖန်တီးသူ၊ ဖိုင်ရင်းမြစ်နှင့် ဖိုင်၏လိုင်စင် စသည်တို့ ပါဝင်ရမည် ဖြစ်သည်။ ဖိုင်အားလုံးသည် အခမဲ့ မူပိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် "fair use" (အရည်အသွေးနိမ့် သို့မဟုတ် သီချင်းတစ်ပုဒ်၏ အစိတ်အပိုင်းမျှသာ) အတွက် သင့်လျော်သော လိုင်စင်ဖြစ်ရမည်။ Wikipedia:File copyright tagsမှ သင့်လျော်သော လိုင်စင်ကို ရွေးချယ်ပေးရမည် ဖြစ်သည်။ ပုံအတွက် လိုင်စင်အချက်အလက်ကို ဆုံးဖြတ်သူမှာ မူပိုင်ခွင့်ထိန်းသိမ်းထားသူ (ဖိုင်၏ မူလဖန်တီးရှင်၊ ယင်း၏ ဝန်ထမ်း၊ စသည်) ဖြစ်ပြီး ဖိုင်တင်သူ မဟုတ်ကြောင်း သတိပြုပါ။ မူပိုင်ခွင့်ရှိသော ပုံများအား "သင့်လျော်စွာ အသုံးပြုခြင်း"တွင် သတ်မှတ်ထားသော အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက် ရှိပါသည်။ မည်သည့်ပုံများကို upload တင်ရန်အတွက် လက်ခံသည်ဆိုသည်အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ Wikipedia:မူပိုင်ခွင့်များ၊ ပုံအသုံးပြုခြင်း မူဝါဒ၊ Wikipedia:သင့်လျော်စွာ အသုံးပြုခြင်း လမ်းညွှန်ချက်၊ နှင့် Wikipedia:Non-free content တို့ကို ဖတ်ရှုပါ။ အကယ်၍ သီးသန့်ပုံတစ်ခုအတွက် မေးခွန်းများ မေးမြန်းလိုပါက Wikipedia:မီဒီယာ မူပိုင်ခွင့် မေးခွန်းများတွင် မေးမြန်းနိုင်သည်။
အသုံးဝင်သော လင့်ခ်များ (ဝီကီအတွင်း)
အခြားကြည့်ရန်။ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနိုင်ငံ၏ အလံတော်
အကယ်၍ တူညီသော ဖိုင်၏ အခြား ဗားရှင်းများ (အထူးသဖြင့် ပိုမိုကြီးသော ဗားရှင်းများ) ရှိပါက ယင်းတို့ကို လင့်ခ်ချိတ်ဆက်ပေးပါ။
[[Media:Goldfish-in-tank2.jpg|မတူညီသော ကင်မရာရှုထောင့်ဖြင့်]] ([[:Image:Goldfish-in-tank2.jpg|info]])
[[Media:Goldfish-in-tank-textfree.jpg|စာမပါသော ဗားရှင်း]] ([[:Image:Goldfish-in-tank-textfree.jpg|info]])
ဝီကီပီးဒီးယားပေါ်တွင် ရရှိနိုင်သော ဖိုင်များကို Wikimedia Commons တွင်လည်း သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ အကယ်၍ ဖိုင်သည် Commons ပေါ်မှ ဖိုင်ဖြစ်ပါက ဖိုင်အကြောင်း ဖော်ပြချက် စာမျက်နှာတွဲ၍ အောက်ပါ စာသားကို ပြသနေမည် ဖြစ်သည်။
ဖိုင်အကြောင်း ဖော်ပြချက် စာမျက်နှာတွင် ပြုလုပ်မည့် တည်းဖြတ်ပြင်ဆင်မှုများကို အထူးအခြေအနေများမှ လွဲ၍ Commons တွင်သာ ပြုလုပ်သင့်သည်။ Commons ရှိ ဖော်ပြချက် စာမျက်နှာကို ပြင်ဆင်ရန်အတွက် " ဖိုင်အကြောင်းစာမျက်နှာ" လင့်ခ်ကို နှိပ်ပါ။ ဝီကီပီးဒီးယား ကဲ့သို့ပင် Commons တွင် မည်သူမဆို ဝင်ရောက် ပြင်ဆင်နိုင်ပြီး အကောင့်တစ်ခု မလိုအပ်ပေ။
တည်းဖြတ်မှု ပြုလုပ်ရာတွင် နမူနာပြရန် လုပ်ဆောင်ချက်သည် ဖိုင်စာမျက်နှာ၏ တည်းဖြတ်နိုင်သော အပိုင်းကိုသာ ပြသမည် ဖြစ်သည်။ ဖိုင်ပုံ၊ ဖိုင်ရာဇဝင်နှင့် ဖိုင်လင့်ခ်များကို ပြသမည် မဟုတ်ပေ။
ဝီကီပီးဒီးယား သို့မဟုတ် Commons ပေါ်တွင် ဖိုင်ကို တည်းဖြတ်၍ မရနိုင်ပါ။ တည်းဖြတ်ရန်အတွက် ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်မည် ဖြစ်သည်။ သင့်လျော်သော ဆော့ဖ်ဝဲလ်ပရိုဂရမ် (ပုံများအတွက် GIMP သို့မဟုတ် Photoshop စသည်) တို့ကို အသုံးပြုပြီး ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်နိုင်သည်။ ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်ပြီးပါက ဖိုင်ကို ဝီကီပီးဒီးယား သို့မဟုတ် Commons ပေါ်သို့ upload ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်သည်။ တူညီသော ဖိုင်အမည်ကို အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းသည် ရှိနှင့်ပြီးသော ဖိုင်ကို အစားထိုးလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။
upload လုပ်ချိန်မှာ ဘာဖြစ်သွားသလဲ
upload ပြုလုပ်စဉ်တွင် ထည့်သွင်းလိုက်သော ဖော်ပြချက် စာသားများသည် ပုံဖော်ပြချက် စာမျက်နှာတွင် ကနဦးစာသားများအနေဖြင့် ဖြစ်လာမည် ဖြစ်သည်။
ဝီကီပီးဒီးယားပေါ်တွင် ဖော်ပြချက်များကို မြန်မာဘာသာစကားမှလွဲ၍ အခြားဘာသာစကားဖြင့် ဖော်ပြခြင်းကို ကျေးဇူးပြု၍ ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ယင်းအစား ဆီလျော်ရာ ဘာသာစကားဝီကီရှိ ပုံအကြောင်း ဖော်ပြချက်စာမျက်နှာသို့ ဘာသာစကားအချင်းချင်း အချိတ်အဆက်များကို အသုံးပြုပါ။
Commons ပေါ်တွင် ဖော်ပြချက်စာမျက်နှာ၌ ဘာသာပြန်ကို ထည့်သွင်းနိုင်သည်။
မူရင်းပုံများကို upload တင်ခြင်း
အကယ်၍ ပုံတစ်ပုံကို သင်ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးထားသည် ဆိုပါက သင့်ထံတွင် XCF, .PSD, သို့မဟုတ် .AI ကဲ့သို့သော ဖောမက်ဖြင့် အရည်အသွေးမြင့် မူရင်းဖိုင်ရှိနေမည် ဖြစ်သည်။ အခြားအသုံးပြုသူများ အလွယ်တကူ ရယူပြင်ဆင်နိုင်ရန်အတွက် ယင်းမူရင်းဖိုင်ကို upload တင်ပေးရန် စဉ်းစားသင့်ပါသည်။ ပုံအကြောင်း ဖော်ပြချက် စာမျက်နှာတွင် မူရင်းဖိုင်ဆီလို့ လင့်ခ်ချိတ်ဆက်ပေးပါ။ အကယ်၍ မူရင်းဖိုင်သည် upload တင်ရန် ကြီးမားနေပါက WinZip သို့မဟုတ် gzip ကဲ့သို့သော ကိရိယာများကို သုံးကာ ချုံနိုင်ပါသည်။
ဝီကီပီးဒီးယားသည် SVG ပုံများကို ပြသနိုင်ရန် အထောက်အပံ့ပေးသည့်အတွက် ပုံများ၏ SVG ပုံပွားများကိုလည်း upload တင်ထားသင့်သည်။
အခြားသော စာမျက်နှာများကဲ့သို့ပင် ဖိုင်များကိုလဲ တူညီရာ ကဏ္ဍတွင် ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ကဏ္ဍစာမျက်နှာတွင် ဆောင်းပါးများကဲ့သို့ အရေအတွက်အနေဖြင့် မဟုတ်ဘဲ နမူနာပုံသေးနှင့်တကွ ဖိုင်အမည်များနှင့် ပြသပေးထားသည်။ ဖိုင်ကဏ္ဍတစ်ခုသည် တူညီရာ အကြောင်းအရာအလိုက်ဖြစ်သော အထွေထွေကဏ္ဍတစ်ခု၏ ကဏ္ဍခွဲဖြစ်သည်။
မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားတွင် F အမည်ရှိ မီဒီယာတစ်ခု၏ ဖိုင်စာမျက်နှာသည် <http://my.wikipedia.org/wiki/File:F>, တွင် တည်ရှိပြီး ယင်းကို Wiki markup [[:File:F]] ဖြင့် ရယူနိုင်သည်။ မီဒီယာဖိုင်တစ်ခု၏ အမည်ကို ယင်း၏ URL မှတဆင့် သိရှိနိုင်ပြီး URL ၏ နောက်ဆုံး သို့မဟုတ် နောက်ဆုံးအပိုင်းမှ ဒုတိယမြောက် ဖြစ်သည်။ ဥပမာ အလံပုံ တွင် အောက်ပါ URL ဖြစ်ပြီး
ဤ URL ၏ နောက်ဆုံးအပိုင်းမှ ဒုတိယမြောက်သည် "Flag_of_France.svg" ဖြစ်သဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ဖိုင်စာမျက်နှာသည် File:Flag_of_France.svg ဖြစ်သည်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အကူအညီ:ဖိုင်စာမျက်နှာ&oldid=438666" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈၊ ၀၃:၄၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။